Monday December 11, 2017 - 20:49:13 in Wararka by Super Admin
Xaaji Abuukar Cumar Cadaan oo ka mid ah Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa Wareysi uu siiyay Radio Dalsan waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin Xaalada Siyaasadeed ee dalka, Amniga, Dhaqaalaha, Musuq maasuqa iyo Go'aankii Mareykanka ee Trump uu
Xaaji Abuukar Cumar Cadaan oo ka mid ah Ganacsatada Soomaaliyeed ayaa Wareysi uu siiyay Radio Dalsan waxa uu kaga hadlay arrimo ay ka mid yihiin Xaalada Siyaasadeed ee dalka, Amniga, Dhaqaalaha, Musuq maasuqa iyo Go'aankii Mareykanka ee Trump uu Magaalada Barakeysan ee Quddus ugu aqoonsaday Caasiimadda Yuhuuda.
Mar uu ka hadlayay xaalada Siyaasadeed ee dalka ayuu sheegay in Madaxweynayaasha Maamul goboleedyada ay yihiin kuwo laga maamulo Itoobiya isla markaana ay fikirkeeda ku Shaqeeyaan sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale isaga oo ka hadlayay dhanka amniga ayaa waxa uu sheegay in Wadooyinka Magaalada Muqdisho ay ku dhib qabaan Shacabka ku nool Gobolka Banaadir, sida in Wadooyinkii Xaafadaha iyo kuwa Caadiga mararka qaar laga xiro.
Caddaani ayaa sheegay in dowladda Hadda jirta ee ay hoggaamiyaan Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre tahay midkii ugu liidatay abid ayna ka xuntahay dowladihii Cabdi Cabdulaahi Yuusuf, Xasan Sheekh iyo Shariif, wuxuu caddeeyay in dhaqan gaalo lagu maamulo magaalada Muqdisho islamarkaana shacabkii fasaad iyo fuxshi lagu haayo.
Wuxuu soo hadal qaaday lixda madaxweyne ee kajira dalka Soomaaliya kuwaas oo dhammaantood ucaysan Xabashida Itoobiya "Dadkaan wadaniyadna malahan islaamka ay sheeganayaan waa beentood waxay rabaan gaalnimo" ayuu yiri Caddaani oo uduur xulayay Kheyre iyo Farmaajo.
Ganacsade Caddaani ayaa ugu baaqay dowladda Federaalka Soomaaliya in ay dalka ku maamusho shareecada islaamka haddii ay sidaas sameysanaya laheli doono ammaan iyo Barwaaqo.
Sidoo kale wuxuu caddeeyay in Xarakada Al Shabaab ay u dagaallameyso sidii dalka loogu maamuli lahaa shareeecada Islaamka, mar uu soo hadal qaaday go'aankii Trump ayuu ku tilmaamay tallaab muujinayso cadaawadda ay Yahuudda iyo Nasaarada uqabaan muslimiinta wuxuuna ka qiseeyay loolanka soo jireenka ah ee u dhaxeeya muslimiinta iyo gaalada.
"Aniga idinla hadlaya waxaan ahay xagjir, sheekh xasan Daahirna waa xagjir muslim ah Donald Trump isna waa xagjir gaal ah" ayuu hadalkiisa sii raaciyay Sheekh Abuukar Caddaani.
Shacabka kunool magaalada Muqdisho ayuu kula taliyay in ay weeraraan xarumaha Q.Midoobe ee UNSOM, weerarkaas oo ay u adeegsan karaan wax walba oo ay heystaan ugu yaraan dhagxaanta.
Xaaji Abuukar Cumar Cadaan ayaa ugu dambeyn codsaday in lasii daayo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo Xabsi Guri ku jira tan iyo Dowladii uu hogaaminayay Xasan Sheekh Maxamuud.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Xaaji Abuukar MP3